Ka Hortagga Cudurrada
Author Topic: Ka Hortagga Cudurrada (Read 11098 times)
« on: November 19, 2007, 12:34:06 AM »
Sida aan wada ognahay xanuunada badankood waa kuwa laga hortagi karo, sababaha keenane ay xariir la leeyihiin khaladaad uu biniaadanka sameeyo kuwaas oo kala duwanaan karo.
Islaamku waa diin aad qiimo weyn u leh oo umada kaga digtay waxyaabaha noocaas oo kale si looga fogaado khatarta cudurada ka dhalan karo, Islaamku wuxuu noo sheegay in aan nadaafada ku dadaalno, wuxuu kaloo noo sheegay in aan ka fogaano mukhaadaraatka iyo galmada xaaraanta ah iyo talooyin aad u badan oo halkaan lagu soo koobi karin.
Cilmiga caafimaadka maanta markii laga hadlayo ka hortagga cudurrada wuxuu xooga saaraa nadaafadda iyo tallaalka looga hortago cudurada laakiin waxaa diinteena ka fahmaynaa in ay intaas ka badan tahay waxyaabaha la rabo qofka muslimka ah inuu ka fogaado iyo waxyaabaha la rabo inuu ku dadaalo.
Haddii aad ka hadalno talooyinka ay dhakhaatiirta bixiyaan si looga hortago cudurrada waxaa ka mid ah kuwaan hoos ku qoran:
• Gacmahaaga ugu yaraan 15 ilbidhiqsi ku dhaq biyo diirran iyo saabbuun (dhaq cunidda ka hor, markaad cunto diyaarineyso, iyo musqusha ka dibba. Qof kasta oo ku daryeelayana sidaas oo kale ha sameeyo.)
• Maydho ama qubeyso maalin kasta haddii laguu oggol yahay.
• La xiriir dhakhtarkaaga haddii aad wax cillad ah ay jirto
• Kormeer afkaaga maalin kasta. la xiriir dhakhtarkaaga haddii aad isku aragto wax guduudasho, dhibco cad, dillaac, ama soo kuusasho ah.
• Xidho weji dabool ama qolka isaga bax marka la nadiifinayo.
• Ha cunin cunnooyin ceedhin ama aan la karin sida:
? Furuto ama khudrad markaas la keenay
? Ukun, hilib ama kalluun ceydhin
• Kari hilib, kalluun iyo ukun si wanaagsan loo sameeyey.
• Soco, ama ugu yaraan ku fadhiiso kursi, 3-4 goor maalintii. Naftaada la jaanqaad aadna ha isu daalin.
• Ka fogow dadka cudurrada qaba sida hergebka, ifilada, xanuun hergeb, bus-buska, jadeecada iyo quman-ka.
Tallaaladu waxay noqon karaan loo qaatay dabaysha, rubella, qumanka, jadeecada, qandhada jaallada ah ama furuqa.
• Ha nadiifin saxaaradaha shinbiraha, tenegga kalluunka, ama sanaadiiqda saxarada bisadda. Haddii uusan jirin qof ku caawiya, xidho gacno gashi rabar ah ka dibna iska tuur markaad isticmaasho.
• Xidho gacno gashi markaad beerta ka shaqayneysid. Ka fogow geedaha iyo ubaxyada dheryaha ku jira.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid iigu soo gudbi qeybta su'aalaha: http://somalidoc.com/smf/index.php?board=31.0
Views: 26352 July 05, 2015, 10:14:33 AM
Views: 39147 September 14, 2016, 12:26:51 PM
Kaadida Geela iyo Cudurrada lagu daaweeyo (Cilmibaaris)
Views: 39447 May 01, 2016, 04:55:03 PM
Cudurrada Galmada la isugu Gudbiyo (STIs)
Views: 43664 September 16, 2007, 12:52:06 AM
FILIN: Cudurrada Galmaha iyo Cigaal Shiidaad
Views: 8888 December 04, 2009, 11:07:48 AM